Zimsec Inoti Vana veChikoro Vave Kukwanisa Kutora Zvakabuda Mubvunzo DzeO Level
Zvakabuda mubvunzo dzeOrdinary Level dzakanyorwa gore rapera zvakabuda neMuvhuro bazi rezvekunyorwa kwebvunzo reZimbabwe School Examination Council (Zimsec)richiti kubudirira kwevana mubvunzo kwakadzikira nezvikamu zvitanhatu kubva muzana kana kuti 6.8%.
Mumashoko kuvatori venhau kuburikidza nedandemutande reTwitter, saschigaro weZimsec Muzvinafundo Eddie Mwenje vati huwandu hwevana vakanyora bvunzo hwakadzikira nezvikamu gumi nechimwechete kubva muzana.
Bazi rinoona nezvebvunzo iri rinoti kusabudirira mubvunzo kwevamwe vana kwakakonzerwa nekusadzidza zvakakwana gore rapera sezvo vanhu vaikurudzirwa kugara mudzimba zvikoro zvakavharwa pachityirwa kupararira kwechirwere cheCovid-19.
Izvi zvinotsigirwa nemutauriri webazi rezvedzidzo VaTaungana Ndoro.
VaNdoro vanoti bazi ravo rakaisa hurongwa hwekuti vana vawedzere nguva yekudzidza gore rino senzira yekuti vapedze zvidzidzo zvose vasati vanyora bvunzo dzavo kupera kwegore rino.
Panyaya yekuderera kwehuwandu hwevana vari kunyora bvunzo sezvabuda mugwaro reZimsec, VaNdoro vanoti vakaisa vashandi vebazi ravo mumatunhu madiki kuti vataure nevana vasiri kuenda kuchikoro vachiva kurudzira kuti vaenderere mberi nedzidzo.
Asi mumwe mubereki VaBeckam Chigiya vanoti hurumende haifanirwe kuhwanda nemunwe vachiti inofanirwa kupa zvikoro zvikwanisiro kuti vadzidzi nevadzidzisi vazvidzivirire kubva kuchirwere cheCovid-19.
Mumwe murairidzi wemuChinhoyi VaRosten Mutapa vanoti havashamiswe nekusabudirira pabvunzo kwevana sezvo vana vasina kuwana nguva yakakwana yekudzidza nekuda kwechirwere cheCovid-19 uye vadzidzisi vanga vari mukuramwa mabasa nekuda kwemari shoma yavanotambira.
Mutungamiri werimwe sangano revarairidzi reAmalgamated Rural Teachers Union kana kuti ARTUZ VaObert Musaraure vanoti pane matambudziko akawanda mubazi rezvedzidzo anoda kugadziriswa.
Munyori mukuru mune rimwe bazi rinomirira varairidzi reZimbabwe Teacher’s Association kana kuti ZIMTA-VaGoodwill Taderera vanoti vamwe vana havana kunyora bvunzo sezvo vanga varoorwa.
Vakuru vezvikoro vanoziviswa kuti vanogona kutora zvakabuda mubvunzo kumahofisi eZimsec mumatunhu avo uye vanoda anogona kuona zvabuda mubvunzo padandemutande kubva nguva dzegumi manheru eMuvhuro kwemazuva mashanu anotevera. Dandemutande iri rinoti www.zimsec.co.zw.